Kooxihii Daacish oo dib uga baxay degmada Qandala iyo ciidamo haatan halkaasi ku wajahan – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Kooxihii Daacish oo dib uga baxay degmada Qandala iyo ciidamo haatan halkaasi ku wajahan
Wararka saakay naga soo gaaraya degamada Qandala oo qiyaastii 90-km u jirta magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in kooxihii Daacish ee maalintii shalay degmadaasi la wareegay ay habeenkii xalay si iskood ah isaga baxeen halkaas.
Kooxdaasi oo tiradooda lagu sheegay inay gaarayeen ilaa 60 qof oo si aad u hubeysan ayaa la sheegay in habeenkii xalay ay si iskood ah isaga baxeen degmadaasi.
Degmada Qandala oo ka tirsan gobolka Bari ayaa maalintii shalay waxaa si nabad gelyo ah ula wareegay kooxda Daacish garabka Soomaaliya oo uu horkacaayo Sheekh C/qaadir Muumin, kaas oo muddo sanad kahor ah shaaciyay inuu si rasmi ah ugu biiray kooxda Daacish islamarkaana uu ka baxay Xarakada Al-shabaab.
Kooxda Daacish ee garabka Soomaaliya ayaa inta badan waxaa la sheegaa inay fariisimo ku leeyihiin buuraha Gal-gala ee gobolka Bari, iyadoona maalintii shalay qaar ka mid ah kooxahaasi ay soo gaareen degmada Qandala balse ay isla habeenkii dib uga baxeen.
Waxaa haatan la aaminsan yahay in kooxaha Daacish ee xalay isaga baxay degmada Qandala ay haatan ku sugan yihiin buuraha Galgala oo hore qeyb ka mid ah kooxahaasi ugu sugnaayeen.
Dhinaca kale, ciidamo ka tirsan kuwa maamulka Puntland ayaa la sheegayaa inay haatan ku wajahan yihiin degmada Qandala ee gobolka Bari, halkaasi oo ay rabaan inay xaaladda amni wax ka badalaan.
Maalintii shalay ayay ahayd markii koox ka tirsan Daacishta Soomaaliya ay la wareegeen gacan ku haynta degmada Qandala ee gobolka Bari, taas oo wal-wal ku beertay dadkii ku noolaa halkaasi, inkastoo inta badan dadkaasi ay isla shalay ka barakaceen guryihii ay halkaasi ka deganaayeen.